अर्थमन्त्री ज्यु सुचना नलुकाउनुस् तपाई सनसिटि गएको प्रमाण भेटिएका छ । (भिडियो सहित)
अनुपमा जोशी / पेप्सीकोलास्थित टाउन प्लानिङमा रहेको सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने एकै परिवारका दुईजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सबैको ध्यान तेतै गएको छ । किनकी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामुहिकरुपमा जमघट नगर्न र घरभित्रै बस्न सम्वोधनमार्फत आग्रह गरेको भोलिपल्टै चैत ८ गते सनसिटी अपार्टमेन्टमा आन्तरिक समिति गठनका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
करिब अढाइ सय मतदाता सहभागी निर्वाचनमा अर्थमन्त्रीका छोरा तिलक खतिवडा मतदाता मात्र थिएनन, सचिव पदमा उम्मेदरवारै बनेका थिए । जहाँ, अपार्टमेन्टका सयौं बासिन्दा चुनावमा सहभागी भएका थिए । र, त्यहाँ कोरोना संक्रमितले पनि मतदान गरेका थिए । संक्रमितहरुले धेरै दिनदेखि साझा लिफ्ट प्रयोग गरेका थिए, एटीएम बुथ पनि साझा नै थियो ।
यता, त्यस निर्वाचनमाबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका छोरा तिलक खतिवडा सचिव पदमा निर्वाचित भएका छन् । र सबैको चासोको विषय त्यस निर्वाचनमा अर्थमन्त्री पुगे वा पुगेनन् भन्ने । हो निर्वाचनमा पक्कैपनि अर्थमन्त्री पुगेका छैनन् । उनका छोराले भनेको यो कुरा सत्य हो । तर, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीका छोराले यो कुरा किन लुकाउदै छन् कि चैत ११ गते निर्वाचित सदस्यहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्न भन्दै अर्थमन्त्री सनसिटी पुगेका छन् ।
यो कुराको पुष्टि गर्न प्राइम टाइम्स टेलिभीजनले अपार्टमेन्टका सदस्य पुष्कर रेग्मी संग प्रतक्ष कुराकानी गरेको छ । जसमा रेग्मीले ११ गते अर्थमन्त्री आएको र आधा घण्टा समय त्यही विताएको बताएका छन् ।यति मात्रै होइन त्यहाँ अर्थमन्त्री अपार्टमेन्टमा प्रवेश गरेको र बाहिरिदै गर्दा गाडी इन्ट्री गराएको उहाँको गाडी नम्वर पनि नोट गरिएको छ । जसको फोटो हाम्रो कालापानीले प्राप्त गरेको छ ।
गाडी इन्ट्री मात्रै होइन, उनि अपार्टमेन्टको सिसि टिभी क्यामेराको फुटेजमा पनि कैद छन् । तर, त्यो सिसिटिभी फुटेज भने अपार्टमेन्टका अध्यक्षको हातमा परिसकेकाले बाहिर आउन सकेको छैन । अब भन्नुस, यति भएर पनि उनका छोराले बुवा अपार्टमेन्टमा नआएको भन्दै किन झुट बोली रहेका छन् ?
यता, अर्थमन्त्रीले पनि आफु नगएको पटक पटक भनिरहेका छन् । उनका आसेपासेले सिधै बिरोध समेत जनाइरहेका छन् । कि अर्थमन्त्री घर अनि सिंहदरवार बाहेक कतै गएनन भनेर ।
उसोत, चिकित्सकहरुको भनाइअनुसार कुनै पनि आशंकित व्यक्तिले कन्ट्याक टे्रसिङका बेला सही सत्य सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ढाँट्नु वा सूचना लुकाउनु भनेको कोरोना रोकथाममा असहयोग गर्नु हो । विभिन्न संचार माध्यममा सुचना जारी भएका छन् तपाइले विदेशबाट आएको मानीस देखे वा सम्पर्कमा आए उनिहरुलाई घरमै वस्न आग्रह गर्नुस । नमाने प्रशासनलाई खबर गर्नुस भनिदै आएको छ । तर, अर्थमन्त्री आफैले यसरी सुचना लुकाउछन् भने, अन्य नागरिकलाई कसले कसरी सम्झाउने ?
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री अनि, सिंगो देशका नागरिकका अभिभावकले यति गैर जिम्मेवार काम गर्दै आएका छन्, कि सिंहदरवारमा गएर मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी भइरेहका छन् । त्यसैले म त भन्छु अर्थमन्त्री होइन, सिंगो मन्त्री परिषद अनि तिनलाई पनि क्वारेन्टानमा राख्नु पर्छ । ति सबैको स्वाव परिक्षण गराउनु पर्छ । होइन भने यस्ता सुचना लुकाउनेलाई प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले भने झै कार्वाहि गर्नुपर्छ ।